KW7 Micro Gbanye
KW7 Agba akwụkwọ ndụ
KW7 Agba ntụ
KW7N Micro Gbanye
KW7F Mmiri Gosiri Micro Gbanye
KW12 Micro Gbanye
KW12 Agba akwụkwọ ndụ
KW12 Uhie na Oji
KW12F Mmiri Gosiri Micro Gbanye
LZ15 micro Gbanye
LZ5 Akara Akara Gbanye
LZ7 Segba aledgba Gbanye
LZ8 Mini Limit Gbanye
LHL Compact Limit Gbanye
LWL General Limit Gbanye
LF Switkwụ Gbanye
IPZ AC Ike Sockets
PBS Push Button Gbanye
site ha na 20-10-14
Waterproof Micro switches na n'ọtụtụ ebe etinyere mmiri gburugburu ebe obibi. Ogo nchedo ruru IP67. A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe obibi, igwe. Anyị factory enye dị iche iche iche iche nke waterproof Micro switches dị iche iche nha. Ebute waya nwere ike ahaziri site chọrọ.
Electronica Munich bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'ụwa niile maka Elektrọnik, Components, Systems na Ngwa. Jikọọ eluigwe na ụwa dum na otu ebe. Anyị na-egosi na anyị Micro mgba ọkụ, ịgba mgba ọkụ, ụkwụ mgba ọkụ na toggle mgba ọkụ e. Ngwaahịa anyị na-adọta uche nke ọtụtụ vi ...
Weebụsaịtị gọọmentị emelitere
Iji jeere ndị ahịa anyị ozi nke ọma, webụsaịtị gọọmentị anyị (www.chinalema.com) ka emelitere. Ihe omuma ahia bu ihe kariri. Ndị ọrụ na-ahụ maka ndị ahịa na-anọ n'ịntanetị ozugbo iji nye ndị ahịa azịza.
Commondị ụdị ndị a na-ahụkarị maka ịmepụta kọmputa
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere microswitches, ị nọ na ibe aka nri. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ụdị micro switches dị iche iche. Nke a ga - enyere gị aka ịhọrọ ngalaba kwesịrị ekwesị iji gboo mkpa gị. Isiokwu a ga-enye gị nghọta miri emi n’ime 6 t ...
The Top Uru Micro ngbanwe I Kwesịrị Knowmara Na Manufacturing
Iwebata micro switches na ụwa nke ngwaọrụ eletrọnị na akụrụngwa bụ mgbanwe. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-emepụta ngwa eletriki, ịnwere ike ịnọ n'ihu asọmpi ahụ site na iji micro switches. Ihe kpatara ya bụ na ngwaọrụ ndị ahụ na-enye ọtụtụ uru. N'isiokwu a, anyị bụ ...
Isi nke Micro switches I Kwesịrị Knowmara Tupu Production
May nwere ike ịhụla micro switches na ụdị ngwaọrụ dị iche iche, mana ị nwere ike ọ gaghị ama aha zuru oke nke ngwaahịa a. Okwu mgbanwe micro na-ezo aka na obere obere snap-action mgba ọkụ. E nyere aha ahụ n'ihi na ụdị ngbanwe a chọrọ obere ike iji rụọ ọrụ. N’isiokwu a, anyị bụ ndị g ...
Micro Push Button Micro Gbanye No Nc ọnụ, Push Button Micro Gbanye, Push Button Footswitch, Toggle Gbanye buut, Electric Toggle Gbanye, Toggle Gbanye,